Oovimba abagcina i-EUR / USD
Udidi: YeEUR / USD
I-EURUSD iHovers Kufuphi kwiinyanga ezininzi eziphantsi, phantsi kweNqanaba le-1.1250
Ukuhlaziywa: 22 Novemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Novemba 22
Kuyo yonke iseshoni, isibini se-EURUSD sahlala kwicala elilahlekileyo kwaye ekugqibeleni sabonwa sihamba kunye nelahleko enkulu malunga nenqanaba le-1.1250-36. Isibhengezo sokuba i-White House ikhethe ukuphinda imisele obambeleyo Usihlalo weFed uJerome Powell okwesihlandlo sesibini kubangele idiphu eyomeleleyo yakutshanje. Indawo ithengisa kwi-1.1253 ngexesha lokubhala, phantsi kweepesenti ze-0.25 ngosuku.
Amanqanaba okumelana: 1.1525, 1.1422, 1.1300
Amanqanaba enkxaso: 1.1200, 1. 1150, 1.1100
I-EURUSD yexesha elide iTrend: Bearish
I-EURUSD iye yatshona kwimihla ngemihla ephantsi, njengoko ibonwa kwitshathi yemihla ngemihla, emva kokwandisa ukwaphulwa kwamva nje ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ze-5 malunga nenqanaba le-1.1300. Oku kuveza ithuba lokutsalwa okunzulu kunye nokuvavanywa kwakhona kwenkxaso yengqondo malunga ne-1.1200. Ngaphantsi kwenqanaba le-1.1200, isimo sengqondo esisezantsi se-euro sisengozini.
Ngokubanzi, i-EURUSD ihlala i-bearish ngelixa irhweba phantsi kwenkxaso enkulu ethe tye yajika ukuchasana kunye nenqanaba elibalulekileyo kwi-1.1422. Ukuqhekeka kwinqanaba le-1.1300, ngakolunye uhlangothi, kuya kujolisa kwinqanaba le-1.1350 kwindlela eya kwiindawo ze-1.1400. Ukuwa kwemimandla ye-1.1200, kwenye indawo, ibonwa njengesalathisi sokuqhubeka kwe-bearish.
I-EURUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Qalisa
Umngcipheko ulinganiswe kwi-negative kwitshathi yeeyure ze-4, njengoko isibini sikhula ngaphantsi kwe-bearish eqinile ye-5 kunye ne-13 ehambayo. Iimpawu zobuchwephesha ziye zatshintshela kwi-downside, kunye namanqanaba angalunganga. Nangona kunjalo, kwimeko yangoku, i-RSI ayikafikeleli kumhlaba othengisiweyo, okuvumela ukuthengiswa okungakumbi.
Kwi-upside, ikhefu phezu kwenqanaba lokumelana ne-1.1300 linokuthi litshintshe i-intraday bias ukuba ingathathi hlangothi. Kwicala elisezantsi, iindawo ze-1.1200 zibonelela ngenkxaso yokuqala. Inqanaba elilandelayo elibalulekileyo lenkxaso lijikeleze uphawu lwe-1.1150. Ukuba kukho ilahleko engaphezulu, inqanaba lokwandiswa kwe-1.1100 lokuhla okuphantsi kunokuvavanywa.
tags EURUSD, Uhlalutyo Technical
I-USDCHF ithatha umphunga ukuya kwi-0.9300, iNqabela kwiiVeki ezininzi eziPhezulu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-16 kaNovemba
Ebudeni be-0.9237 ephantsi, i-USDCHF ibini ithatha i-steam eyongeza kwinzuzo yosuku lwangaphambili, i-0.55 ipesenti ukuya kwi-0.9294 intraday ephezulu ngexesha leseshoni yaseMelika ngoLwesibili. I-USD yenyuka yaya kufutshane neenyanga ezili-16 eziphezulu njengoko ulindelo lwemarike lukhula ukuba Ibhanki ephambili yase-US kuya kunyanzeleka ukuba benze ndlongondlongo ukulwa nokunyuka kwamaxabiso ngenkani.
Amanqanaba okumelana: 0.9472, 0.9375, 0.9300
Amanqanaba enkxaso: 0.9275, 0.9175, 0.9102
Njengoko i-rebound evela kwi-0.9102 iqhubeka, ingqwalasela ngoku ikwinqanaba lokumelana ne-0.9300. Ikhefu eliqinileyo apho liya kubonisa ukuqala komjikelezo wesithathu wepatheni yokulungisa ukusuka kwi-0.8757. Isantya esilungileyo se-oscillators esikufutshane siphucula ngoku. I-RSI izama ukugcina i-bullish trend ukuya kwi-70.
Ngomhla wesihlanu ngokulandelelana, i-USDCHF igcina i-traction eqinile ngaphezu kweendawo zayo zokuxhasa ukusuka kwinqanaba le-0.9100, kunye neebini ezizama ukuphula phezulu. Ukuqhawuka okuqinileyo kwinqanaba lokumelana ne-0.9300, ngakolunye uhlangothi, kuya kuba luphawu lokuqala lokuguqulwa kwendlela, ukutsala ingqalelo kwinqanaba elibalulekileyo le-0.9375 lokumelana nokuqinisekiswa.
I-USDCHF okwangoku izama inqanaba lokumelana ne-0.9300 emva kokubambisana okudlulileyo kwi-5 kunye ne-13 ehambayo. Ikhefu phantsi kwenqanaba le-0.9275 lingakhokelela kuvavanyo lwezinga le-0.9250. Nokuba ukuvalwa kufutshane namanqanaba enkxaso kunokunyusa umgangatho we-bearish kungekudala. Ukuba ixabiso liwela ngaphantsi kwe-0.9250, uxinzelelo lwe-bullish luya kuncipha, lubonisa inqanaba elilandelayo lokuxhasa kwi-0.9200.
Ngexesha elifutshane, ukunyuka okuvela kwi-0.9101 kuthathwa njengesigaba se-2 sendlela eyaqala nge-0.9088 (ephantsi). Akukho zikhombisi zicacileyo zokugqitywa ngeli xesha. Ukuqhawuka okuqinileyo kwinqanaba lokumelana ne-0.9300, ngakolunye uhlangothi, kuya kuba ngumqondiso wokuqala we-trend reversal, ukutsala ingqalelo kwinqanaba eliphezulu le-0.9375 lokuqinisekisa.
I-EURUSD engaqinisekanga ngekhosi yayo emva kokubhalisa i-2021 Lows phantsi kwe-1.1422
Ukuhlaziywa: 15 Novemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Novemba 15
I-EURUSD ihlala iphantsi koxinzelelo oluninzi kodwa ibonakala iphinda iphinde ibuyele kwindawo ethile ngaphezu kwendawo ye-1.1400 ekuqaleni kweveki. Kwixesha elikufutshane, ukongezwa kokuhla kwehle kubonakala ngathi kunokwenzeka njengoko isibini sihlala singaqinisekanga ngekhosi emva kokubhalisa i-2021 entsha phantsi kwe-1.1422. Ithemba le-ECB akwanelanga ukuxhasa i-EUR.
Amanqanaba okumelana: 1.1602, 1.1525, 1.1450
Amanqanaba enkxaso: 1.1400, 1.0879, 1.0635
Imihla ngemihla, i-EURUSD ibonakala i-bearish, kwaye ukuhlanganiswa ngaphantsi kwe-1.1422 kunokubeka umgangatho wokulahlekelwa okungakumbi. Ukutenxa kumanqanaba angaphezu kwe-1.1500, ephawula umda ophezulu woluhlu olubanzi, unokuthatha isantya. Inqanaba le-1.1400 linokusondela ukuba ukuphuma kwansuku zonke kungaphantsi kwe-5 ehambayo.
Ukulandela ukuhla, i-EURUSD idibene nenkxaso kwixabiso lexabiso le-1.11420, apho ifike kwi-intraday lows ngexesha leseshoni yanamhlanje (phakathi koNovemba). Ukuba isibini siyaqhubeka nokungena phantsi kwendawo yenkxaso ebonisiweyo, iya kuboniswa kwi-low-year lows phakathi kwe-1.0879 kunye ne-1.0635 ngaphambi kokuphela konyaka we-2021.
I-EURUSD isathengisa kwi-bearish trend ngezantsi kwe-1.1450, kwaye i-intraday sentiment ihlala ngaphantsi koluhlu oluqhelekileyo. Ukuqhawuka kwinqanaba le-1.1422, ngakolunye uhlangothi, kunokuqinisekisa imeko apho ukuguqulwa kwinqanaba le-1.1692 kuya kugqitywa kwinqanaba le-1.1400.
Ilahleko eyongezelelweyo inokukhokelela kuvavanyo lwe-1.0879 kunye nekhefu le-2020 lows. Ikhefu lenqanaba lenkxaso ye-1.1400 kunye nenombolo ejikelezayo, ngakolunye uhlangothi, iya kukhawulezisa i-downtrend kwaye iholele kwelinye icala lokuhla.
Abathengi be-EURUSD baphinde baphume kwiNqanaba le-1.15 njengeeBhere ezijongene neentloko
Ukuhlaziywa: 8 Novemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Novemba 8
Ngethuba leseshoni yangoMvulo, i-EURUSD ihlala kwi-offensive, ukugatywa okulandelayo ekupheleni kweveki engaphambili, kubonisa isalathisi sokuqala sokubuyisela. Njengoko iseshoni iqhubeka abathengi baphinda baphinde bavele njengoko abathengisi bejongene ne-headwinds ukusuka kwinqanaba le-1.1500. Le veki kufuneka ithule kuneyangaphambili, kodwa imingcipheko ephawulekayo ibandakanya Idatha yokunyuka kwamaxabiso e-US, I-Fed kunye ne-ECB izimvo.
Amanqanaba okumelana: 1.1704, 1.1640, 1.1604
Amanqanaba enkxaso: 1.1525, 1.1422, 1.1250
I-EURUSD yexesha elide iTrend: Ukutshintsha
Ukususela kumbono wobugcisa bemihla ngemihla, isibini siqinisekisile ukuvela kwe-bullish yokuqala nge-1.1550 ye-middle-level kwaye ibonakala isendleleni yokwandisa i-trajectory yayo ephezulu ukuya kwinqanaba eliphezulu lokumelana ne-1.1600. I-EURUSD kwangaphambili ibonakala ibuyile, njengoko ithengisa ngoku kufutshane ne-1.1595 intraday high.
Ukuqhubela phambili ukusuka kwinqanaba le-1.1513 kuchongwa njengento enokubuyela kwindawo ephezulu kwizinga le-1.1226 (eliphezulu) kumxholo omkhulu. Emva koko, i-traction eqhubekayo ingabonwa kwinqanaba le-1.1600, elinokukhokelela ekuchaseni amaqela. Ngethuba nje inqanaba lenkxaso ye-1.1550 libambe, le nto iya kuba yimeko ekhethiweyo.
I-EURUSD yeXesha elifutshane leNdlela: Ukulinganisa
I-EURUSD isadibanisa ukusuka kwi-1.1513 ephantsi, kwaye i-intraday bias ayithathi hlangothi. Ukuba enye idiphu iyenzeka ngelixa urhwebo loluhlu luqhubeka, i-downside inokuthi ifakwe kwinqanaba lenkxaso ye-1.1550, evumela ukubuyiswa kuqale. Kwi-downside, ikhefu lenqanaba elincinci lenkxaso ye-1.1525 inokutshintsha i-intraday bias kwi-bearish kwaye iholele ekuhlanganiseni ngaphambi kokubeka omnye utyando.
Kwitshathi yeeyure ezine, i-EURUSD ixhamla kwi-bounce yakutshanje, kwaye i-Relative Strength Index idlulile i-midline yayo ye-50. Iibini zemali zilungiswe kwi-downside kwixesha elidlulileyo lenzeke kwiveki ephelileyo. Kwi-downside, kuphela ukuvala ngaphantsi kwezinga le-1.1550 kuya kuqinisekisa ukuba ukuphakama kwesikhashana kusungulwe, kwaye ukuhlehla okukhulu ukuya kwinqanaba le-1.1525 kunokwenzeka.
I-EURUSD Ngaphantsi koxinzelelo Ifumana iNkxaso ethobekileyo kwiNqanaba le-1.1546
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Novemba 1
Ukulandela ilahleko enkulu yemihla ngemihla ukususela phakathi kukaJuni, i-EURUSD ibambelele kwi-1.1546. Njengoko idola yaseMelika ibuyisela umva inzuzo enkulu yangoLwesihlanu phakathi kokunyuka kwentengiso yentengiso, esi sibini sizama ukwandisa ukubuyiswa kwayo ukusuka kwiiveki ezimbini ezisezantsi ze-1.1535. I I-ISM yokwenziwa kwePMI ngo-Okthobha weza phezulu kancinci kunoko bekulindelwe. Ukulandela ezi ndaba, i-US Dollar Index yenyuka kancinci kwaye ayitshintshanga ngolu suku.
Amanqanaba okumelana: 1.1804, 1.1704, 1.1602
Amanqanaba enkxaso: 1.1550, 1.1500, 1.1422
Ngethuba nje inqanaba lokumelana ne-1.1909 liqhubeka, ukuhla ngokupheleleyo kwi-1.2350 (i-Jan 2021 ephezulu) isenokusebenza. Inqanaba le-1.1422 yinjongo elandelayo (ephantsi). Nangona kunjalo, imbuyekezo eqhubekayo edlulileyo kwinqanaba le-1.1600 ingabonisa ukuphela kwalo mkhwa wangoku.
Umkhwa wokulungisa ukusuka kwinqanaba le-1.1850, ngakolunye uhlangothi, uya kugcinwa kunye nokubuyisela okutsha ngaphezu kwenqanaba le-1.1602. Nangona i-upside kwi-1.1692 yangaphambili yeveki ephezulu iya kunqunyulwa yi-rebound evela kwi-1.1535 ukuya kwinqanaba le-1.1640.
I-EURUSD ye-intraday tendency ayithathi hlangothi ekuhlanganiseni ukusuka kwinqanaba le-1.1550. Enye i-rally ingenzeka, kodwa i-pullback esuka kwi-1.1692 ukuya kwi-1.1535 kwinqanaba le-1.1602 kufuneka ithintele amandla aphezulu.
Kwi-downside, ikhefu lezinga le-1.1550 lingakhokelela kwi-bearish trend trend. Nangona kunjalo, i-pullback enzulu ukuya kumanqanaba e-1.1535 kunye ne-1.1500 inokufuna ikhefu kwizinga lokumelana ne-1.1602.
Ukuhlala kwe-EURUSD apha ngezantsi kwe-1.1650, amaXabiso amaXabiso aThintela ukubuyela kwakhona kwi-Euro
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Okthobha 18
Isibini se-EURUSD siye safuna ukubuyela kwi-1.1571 yayo esezantsi kwangoko ngemini, kodwa saphela kwi-1.1622, sabuyela kubunzulu obungaphantsi kwesitshixo se-1.1650. Ngengqondo enkulu, isibini asikakwazi ukwaphula ngaphezulu kwe-Okthobha ephezulu ye-1.1640. Iinzame ezikhulayo ziye zaphazanyiswa yimeko yokuthengisa emngciphekweni obonwe ngoMvulo, ubukhulu becala Izalathiso zesitokhwe saseYurophu kwiRed Street nakwiWall Street.
Amanqanaba okumelana: 1.1750, 1.1704, 1.1640
Amanqanaba enkxaso: 1.1550, 1.1500, 1422
I-EURUSD ifumene umkhondo ngoMvulo emva kokuba iinkunzi zeenkomo zayeka ukumakisha kwi-1.1618 ngosuku olwandulela olo. Ikhefu eliqinileyo ngaphezulu kwe-1.1650 liza kuvula indlela yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye lisuse umngcipheko okhoyo ngoku obangelwa kukuhamba ngamandla kwemihla ngemihla.
Iziphumo ezongeziweyo ngoku kufuneka zigqithe kule ndawo, kunye nomgca wokumelana kwangoko kwinqanaba 1.1683, ukuvumela ukubuyela kwimeko yesiqhelo. I-rally ingaqhubeka iye kwinqanaba elilandelayo lokumelana neqela kwi-1.1704. Inokuqhubeka nokuba imeko ikhethwayo ukuba inqanaba lenkxaso kwi-1.1525 ligcina.
I-intrusay ye-intrusay ye-EURUSD ayitshintshi, ngokugxininisa kwi-1.1602 yokumelana nokujika kwinqanaba lokuxhasa. Ukwahlulwa kokuthatha isigqibo kuya kuthetha ukuba ukwehla kokulungisa kugqityiwe. I-intraday bias iya kutshintshelwa kwicala elingaphezulu kuvavanyo kwakhona lwenqanaba le-1.1640.
Inqanaba le-1.1550, umgca wenkxaso ukusukela kwiveki ephelileyo, ngumgca wokuqala wokhuselo, olandelwa linqanaba le-1.1525, iswingi ephantsi ebikwe ngaphambili. Amanqanaba e-1.1640 kunye no-1.1704 yile migca ilandelayo yokubukela. Isalathiso samandla ahlobene, ngakolunye uhlangothi, sibuyele kwiminyaka engama-60, sibonisa iimeko ezidlulileyo zaphakathi.
I-EURUSD ibambe ngaphakathi kwe-Mid-1.1500s, ebanjwe yiGreenback's Recovery
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Okthobha 11
Isibini se-EURUSD singqingiwe kubathengisi, sirhuqa amaxabiso sibuye phakathi kwi-1.1500s ekuqaleni kweveki. Ukubuyiselwa kwemali yokuthenga yedola, kudityaniswe namazinga aphezulu e-US kwijika yonke, kukhuthaza inyathelo lamaxabiso e-US Index ukuba lihambele phezulu.
Amanqanaba okumelana: 1.1850, 1.1750, 1.1640
Amanqanaba enkxaso: 1.1529, 1.1422, 1.1250
Yonke imihla, i-EURUSD ibonakala ibuthathaka, kwaye ukudityaniswa okungaphantsi kwe-1.1529 kungabeka inqanaba lelahleko ezingakumbi. Ukuphambuka kumanqanaba ngaphezulu kwe-1.1650, ephawula umda ophezulu woluhlu olubanzi, kunokufumana isantya. Inqanaba le-1.1422 linokusondela ukuba ukuphuma kwemihla ngemihla kungaphantsi kwenqanaba lenkxaso ethe tyaba le-1.1529.
Ukulandela ukwehla, i-EURUSD iya kudibana nokuchasana kuluhlu lwamaxabiso e-1.1640, apho ifikelele khona kwi-intraday highs ekuqaleni kuka-Okthobha. Ukuba isibini siqhubeka sinyuka ngaphezulu kwenqanaba lokuchasana, kuya kutyhilwa kumndilili wokuhamba kwemihla ngemihla 13 kwi-1.1623 kunye nomqobo othe tyaba kwi-1.1640.
I-EURUSD isathengisa kuluhlu olungezantsi kwe-1.1600, kwaye imvakalelo ye-intraday ikuluhlu oluqhelekileyo. Ukuphulwa kwenqanaba le-1.1750, kwelinye icala, kunokuqinisekisa imeko apho ukudityaniswa kwinqanaba le-1.1908 kugqitywe kwinqanaba le-1.1529.
Ukuqhubela phambili kokufumana kunokukhokelela ekubuyiseleni kwakhona kwe-1.1640 kunye nekhefu le-1.1908 ephezulu. Ukuphuka kwenqanaba lenkxaso le-1.1529, kwelinye icala, kuya kubangela ukuthotywa okuphantsi kwaye kukhokelele kolunye ujikelezo lwedrop. I-EURUSD ngoku ithengisa ezantsi kwixesha elifutshane, nge-1.1500 kulindeleke ukuba inikezele ngenkxaso kwangoko kwilahleko engaphezulu.
Ukufumana i-EURUSD ukuya kwi-1.1640, iDola ngokucinezelwa ngokulandelayo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Okthobha 4
Ukulandela ukwehla okumandla kwiveki ephelileyo ukuya kwi-1.1562, ezi ndibano zimbini zeseshoni yesibini ethe ngqo kwaye zibuyisa umndilili weendawo ezi-5 ezihamba kufutshane ne-1.1640. Imali enye ibuyela kwindawo yayo ephezulu kwaye izisa isibini se-EURUSD ngasemva ngaphezulu kwendawo ye-1.1600 ekuqaleni kweveki. Ukubuyiselwa okwangoku kwezi zibini kuncediswa ngenqaku elinikezelweyo kwi-greenback, kunye namaxabiso azinzileyo kwintengiso ye-bond yase-US nayo inegalelo Uxinzelelo lokuthengisa nge-USD.
Amanqanaba enkxaso: 1.1562, 1.1460, 1.1150
Ukucinga ixesha elide, umbono ophindaphindiweyo kwi-EURUSD kulindeleke ukuba uhlale ungagungqi logama nje isibini sithengisa ngaphezulu kwenqanaba elithe tyaba kwi-1.1602 namhlanje. Ku-1.1640, i-EURUSD ifuna ukutyhalela kwinqanaba lokumelana ngokuthe tyaba kwi-1.1663. Isalathiso se-RSI sisandula ukubhengezwa ngaphezulu, sibonisa ukunyuka okuthe kratya.
I-EURUSD igcina utyekelo lwayo lwe-bullish njengoko itsibela enye iseshoni, ityhala isibini ngaphaya kwempawu ze-1.1600 ukuya kwisiqalo esitsha seveki. I-rally ingaqhubeka kwinqanaba elilandelayo lokumelana neqela kwi-1.1750. Inokuqhubeka nokuba imeko ikhethwayo ukuba inqanaba lenkxaso lihleli lilungile kwi-1.1562.
Ukuphuka kwenqanaba elincinci lokumelana ne-1.1640 yi-EURUSD kunokujongela phantsi umbono wokuqala wobumnyama kwaye kuthetha ukuba ukubuyela kwinqanaba le-1.1562 kusaqhubeka. I-Intraday bias ngoku inyukele kwinqanaba le-1.1663. Ukophula umthetho kungavula indlela yovavanyo lwenqanaba le-1.1908 kwixesha leyure ezi-4.
Kwicala elisezantsi, ukwehla ukusuka kwi-1.1908 ukuya kwi-1.1562 kwi-1.1622 kufuneka kwandiswe ngaphantsi kwezithintelo ze-1.1602. Ukuphumelela kwenqanaba le-1.1640, kwelinye icala, kuya kuba bubungqina bokuqala bokuba ukulungiswa kwinqanaba le-1.1908 kugqityiwe. I-intraday bias iya kuzama ukunyukela kwi-1.1663 yokuqinisekisa kwakhona.
Ukuthengiswa kwe-EURUSD phantsi kwe-1.1700 phakathi kweDola ebuthathaka, unyulo lwaseJamani
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Septemba 27
Emva kokudodobala kweeveki ezintathu phantsi kwe-1.1720 kwiseshoni yakuqala yaseMelika, abathengisi be-EURUSD basaphikisana nabathengi. I-US Dollar Index yehla kancinci kodwa ihlala ngaphezulu kwama-92.70. I-euro isindwa ziziphumo zonyulo lwaseJamani, ngokulandelayo ILagarde yeECB intetho.
Amanqanaba okumelana: 1.1805, 1.1804, 1.1750
Amanqanaba enkxaso: 1.1683, 1.1663, 1.1602
I-EURUSD izama ukuhlala isemgceni wokuxhasa ngokuthe tyaba kwi-1.1704, eyenze phakathi ku-Agasti, kodwa mhlawumbi kunzima ukwenza njalo. Isalathiso samandla esiNxulumene ngoku siphantsi kwee-midpoints, nangona kunjalo sibonisa ukuba iimeko ezigqithileyo azikabonakali kwitshathi yemihla ngemihla.
Ukuxhathisa kwexesha elikufutshane kunokwenzeka ukuba kujikeleze i-1.1750, eyayikwindawo ephantsi ngoJulayi. Inqanaba le-1.1908, enye incopho ukusuka kwelo xesha linye, lilandelwa kwinqanaba le-1.1975 njengendawo ephambili yokumelana. Ku-1.1663, kulindeleke inkxaso. Inqanaba le-1.1909, ukuphakama kukaSeptemba, kulandelwa inqanaba le-1.1975.
Okwangoku, imo ye-EURUSD yangaphakathi iyathandeka. Imeko yangoku ibonisa ukuba urhwebo olusecaleni oluqale ngo-1.1.1909 luye lwagqitywa ngo-1.1683. Iindibano ezizezinye kulindeleke ukuba ziphinde zisebenzise inqanaba le-1.1900 kwiiseshoni ezilandelayo. Esi sibini sinokuqhubeka sihamba kwiseshoni nganye.
I-bounce ngokubanzi ukusuka kwinqanaba le-1.1683 inokuphinda iqalwe kwakhona ukuba iyaphuma. Ukophulwa kwenqanaba lokuxhasa elincinci kwi-1.1663, kwelinye icala, kunokushenxisa uqikelelo kwaye kukhokelele ekuthatheni icala kwi-intraday. Logama uxhathiso lwe-1.1704 lujika lube yinkxaso, le inokuba yimeko ekhethiweyo.
I-EURUSD iyaqhubeka nokulahla umphunga ngelixa iRhwebo kufutshane ne-1.1700
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Septemba 20
Imali enye ivula iveki kwimeko efanayo yobumnyama njengoko igqibile eyadlulayo, irhuqa i-EURUSD kufutshane nenqanaba lesiseko le-1.1700. Ngaphambi kwesibini seFed Intlanganiso ye-FOMC kule veki, idola yaseMelika inyusa unyuko olusekwe ngokubanzi njengoko i-DXY ibetha indawo ephezulu ye-93.40.
Amanqanaba okumelana: 1.1908, 1.1850, 1.1804
Amanqanaba enkxaso: 1.1663, 1.1602, 1.1422
Esi sibini sithengisa ngoku kwi-1.1708, ngenkxaso elandelayo kwi-1.1663, ilandelwa yi-1.1602 ephantsi, kwaye okokugqibela i-1.1422 isezantsi. Ikhefu le-1.11750, kwelinye icala, liya kujolisa kwi-1.1804 kwindlela eya kwi-1.1909 (ephezulu ngenyanga). Ukonyuka kokukhetha okungalunganga kuboniswa yi-RSI ye-bearish kunye ne-bearish 5 kunye ne-13 yomndilili wokuhamba.
Okwangoku, esi sibini sehle nge-0.15 yeepesenti kwi-1.1705, ngokuchasene kwangoko kwi-1.1750 ngolwesiHlanu, nge-17 kaSeptemba esezantsi kwaye ekugqibeleni ngo-1.1804. Ukophulwa kwenqanaba le-1.1804 ukuya kwinqanaba elingaphezulu kunokuthatha ixabiso ukuya kwinqanaba le-1.1909 (2021 Septemba 3), kwindlela eya kumanqanaba e-1.1975.
I-EURUSD iyaqhubeka nokuwa namhlanje, nge-intraday exhomekeke kwinqanaba le-1.1704 lenkxaso. Ukuqala kwakhona kokuhla kokulungiswa kwinqanaba le-1.2350 kuya kuqinisekiswa kukuqhekeka. Kwicala elingasentla, ikhefu elingaphezulu kwenqanaba elichaseneyo lokumelana no-1.1804 linokutshintsha ukuthambeka kwe-intraday kungathathi hlangothi. Kwicala elisezantsi, imimandla ye-1.1663 ibonelela ngenkxaso yokuqala.
Ikhefu elingaphezulu kwenqanaba lokumelana ngokuthobekileyo le-1.1804, kwelinye icala, liya kuthi libe nefuthe kwiimvakalelo zangaphakathi. Kwimeko apho kuthe kwakho ukubuyela umva, nangona kunjalo, umngcipheko unokuhlala usezantsi njengoko nje inqanaba lokumelana ne-1.1850 libanjiwe. I-EURUSD ngoku ithengisa ezantsi kwixesha elifutshane, nge-1.1663 kulindeleke ukuba inike inkxaso ngokukhawuleza kwilahleko engaphezulu.
← Entsha izithuba1 2 ... 20 abaDala izithuba →